Xidhiidhka Raadiyaha STL - FMUSER
Qaybtaan waxaa ku jira DSTL-10-1/10-8 AV/HDMI/CVBS/AES/EBU/HDMI iyo sidoo kale gudbiyaha STL10 5.8GHz STL iyo DSTL taxane ah. DSTL waxaa loola jeedaa nadaamka STL dhijitaalka ah oo dhan-dhibcood ah oo dhamaystiran (studio to transmitter link) kuwa u baahan in ay ka gudbiyaan muuqaal iyo maqal meela badan una gudbiyaan caddaynta saldhiga. Nidaamka waxa lagu xidhi karaa xariiqa AC 110/220V. Codeeyaha waxaa lagu qalabeeyay 1-way stereo audio input ama 1-way HDMI/SDI galinta video oo leh1080i/p 720p. STL waxay bixisaa masaafo dhan 10km iyadoo ku xiran meesha ay ku taal ( sinnaanta) iyo muuqaalka indhaha.
Qiimaha (USD): 4,800
FMUSER ADSTL, oo ​​sidoo kale loo yaqaan isku xirka gudbiyaha istuudiyaha raadiyaha, isku xirka gudbiyaha istuudiyaha ee ka sarreeya IP, ama isku xirka gudbiyaha istuudiyaha, waa xalka ugu fiican ee FMUSER loo isticmaalo masaafo dheer (ilaa 60 km qiyaastii 37 mayl) gudbinta maqal iyo muuqaal aaminnimo sare leh inta u dhaxaysa istuudiyaha baahinta iyo munaaradda anteenada raadiyaha.
FMUSER 4 Dhibic Waxaa loo Diray 1 Saldhig 5.8G Digital HD Fiidiyowga STL Istuudiye Iskuxirka DSTL-10-4 HDMI-4P1S
Qiimaha (USD): 11500
Taxanaha isku xirka FMUSER 5.8GHz waa dhibco badan oo dhameystiran oo ku socda nidaamka STL dhijitaalka ah (Studio to Transmitter Link) kuwa u baahan inay ka gudbiyaan muuqaal iyo maqal meel dhowr ah una gudbiyaan saldhig. Caadi ahaan loo isticmaalo goobta ilaalinta amniga, gudbinta fiidiyowga, iwm. Xiriirku wuxuu dammaanad qaadayaa tayada maqalka iyo muuqaalka cajiibka ah - feer iyo caddayn. Nidaamka waxa lagu xidhi karaa xariiqa AC 110/220V. Codeeyuhu wuxuu ku qalabaysan yahay 1-way stereo audio inputs ama 1-way HDMI / SDI fiidiyoow galinta 1080i/p 720p. STL waxay bixisaa masaafo dhan 10km iyadoo ku xiran meesha ay ku taal ( sinnaanta) iyo muuqaalka indhaha.
Qiimaha (USD): 4000
Taxanaha isku xirka FMUSER 5.8GHz waa nidaam STL dhijitaal ah oo dhameystiran (Studio to Transmitter Link) kuwa u baahan inay ka soo gudbiyaan muqaal iyo maqal istuudiyaha una gudbiya meel fog ku taal (sida badan buurta sare). Xidhiidhku waxa uu dammaanad qaadayaa tayada maqal iyo muuqaal ee cajiibka ah - feer iyo caddayn. Nidaamka waxa lagu xidhi karaa xariiqa AC 110/220V. Codeeyuhu wuxuu ku qalabaysan yahay 1-way stereo audio inputs ama 1-way HDMI / SDI fiidiyoow galinta 1080i/p 720p. STL waxay bixisaa masaafo dhan 10km iyadoo ku xiran meesha ay ku taal ( sinnaanta) iyo muuqaalka indhaha.
FMUSER 5.8G Dijital HD Fiidiyowga STL DSTL-10-4 AV-CVBS Wireless IP Point to Point
Qiimaha (USD): 4200
Taxanaha isku xirka FMUSER 5.8GHz waa nidaam STL dhijitaal ah oo dhameystiran (Studio to Transmitter Link) kuwa u baahan inay ka gudbiyaan muqaal iyo maqal istuudiyaha una gudbiya meel fog ku taal (sida badan buurta sare). Xidhiidhku waxa uu dammaanad qaadayaa tayada maqal iyo muuqaal ee cajiibka ah - feer iyo caddayn. Nidaamka waxa lagu xidhi karaa xariiqa AC 110/220V. Codeeyaha waxaa lagu qalabeeyay ilaa 4 cod-galooyin maqal stereo ah ama 4 AV/CVBS-ga gelinta fiidiyowga. STL waxay bixisaa ilaa 10km iyadoo ku xidhan goobta ( sinnaanta) iyo muuqaalka indhaha.
FMUSER 5.8G Digital HD Fiidiyowga STL Isku xirka Gudbiyaha Istuudiye DSTL-10-4 AES-EBU Wireless IP Point to Link
Taxanaha isku xirka FMUSER 5.8GHz waa nidaam STL dhijitaal ah oo dhameystiran (Studio to Transmitter Link) kuwa u baahan inay ka gudbiyaan maqalka istuudiyaha una gudbiyaan gudbiyaha fog fog (sida caadiga ah buurta sare). Xidhiidhku waxa uu dammaanad qaadayaa tayada maqal iyo muuqaal ee cajiibka ah - feer iyo caddayn. Nidaamka waxa lagu xidhi karaa xariiqa AC 110/220V. Codeeyaha waxa lagu qalabeeyay ilaa 4 stereo AES/EBU Maqal maqal ah. STL waxay bixisaa ilaa 10km iyadoo ku xidhan goobta ( sinnaanta) iyo muuqaalka indhaha.
FMUSER 5.8G Digital HD Fiidiyowga STL DSTL-10-4 HDMI Wireless IP Point to point Link
Qiimaha (USD): 5450
Taxanaha isku xirka FMUSER 5.8GHz waa nidaam STL dhijitaal ah oo dhameystiran (Studio to Transmitter Link) kuwa u baahan inay ka soo gudbiyaan muqaal iyo maqal istuudiyaha una gudbiya meel fog ku taal (sida badan buurta sare). Xidhiidhku waxa uu dammaanad qaadayaa tayada maqal iyo muuqaal ee cajiibka ah - feer iyo caddayn. Nidaamka waxa lagu xidhi karaa xariiqa AC 110/220V. Codeeyaha waxaa lagu qalabeeyay ilaa 4 qalab maqal oo stereo ah ama 4 HDMI galiyeyaal muuqaal ah oo leh 1080i/p 720p. STL waxay bixisaa ilaa 10km iyadoo ku xidhan goobta ( sinnaanta) iyo muuqaalka indhaha.
FMUSER 5.8G Digital HD Fiidiyowga STL DSTL-10-8 HDMI Wireless IP Point to point Link
Qiimaha (USD): 7900
Taxanaha isku xirka FMUSER 5.8GHz waa nidaam STL dhijitaal ah oo dhameystiran (Studio to Transmitter Link) kuwa u baahan inay ka soo gudbiyaan muqaal iyo maqal istuudiyaha una gudbiya meel fog ku taal (sida badan buurta sare). Xidhiidhku waxa uu dammaanad qaadayaa tayada maqal iyo muuqaal ee cajiibka ah - feer iyo caddayn. Nidaamka waxa lagu xidhi karaa xariiqa AC 110/220V. Codeeyaha waxaa lagu qalabeeyay illaa 8 HDMI galitaanka fiidiyoow ah oo leh 1080i/p 720p. STL waxay bixisaa ilaa 10km iyadoo ku xidhan goobta ( sinnaanta) iyo muuqaalka indhaha.
Qalabka Isku xirka Qalabka Isku-xirka ee FMUSER STL10 Studio oo wata Yagi Antenna
Qiimaha (USD): 3665